Dakar mankany New York City sy Washington amin'ny Air Senegal izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Dakar mankany New York City sy Washington amin'ny Air Senegal izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao farany momba an'i Senegal • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Air Senegal dia mandefa sidina vaovao indroa isan-kerinandro mankany Etazonia avy any Dakar, Senegal.
Air Senegal dia mandefa sidina mankany amin'ny seranam-piaramanidina John F. Kennedy any New York.
Air Senegal dia nanambara ny serivisy seranam-piaramanidina Iraisampirenen'i Washington Thurgood Marshall.
Samy hanidina avy any Dakar, Senegal ireo sidina amerikana vaovao.
Air Senegal, ilay mpanamory saina nasionalin'i Senegal, dia nanangana ny sidina fanokafana ho an'ny seranam-piaramanidina John F. Kennedy International any New York sy ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Washington Thurgood Marshall any New York, ny serivisy voalohany indroa isan-kerinandro eo anelanelan'i Dakar sy ireo tanàna roa amerikana.
Ny sidina HC407 dia nandao ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Blaise Diagne tao Dakar tamin'ny 2:56 maraina ary tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina JFK (Terminal 1) any New York tamin'ny 06:51 maraina androany. Ireo mpandeha ho any amin'ny faritra Metropolitan Washington dia nitohy tamin'ity sidina ity taorian'ny nandalovany ny fifindra-monina sy ny fadintseranana tany New York.
Tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina Baltimore Washington (BWI) ny sidina tamin'ny 11:08 maraina izay nandraisan'ny fiaramanidina fiarahabana tafondro rano mahazatra. Ny sidina miverina dia hiainga any Baltimore amin'ny 08:25 alina amin'ny alàlan'ny New York JFK (Terminal 1) mankany Dakar izay kasaina hipetraka amin'ny 12:25 hariva ny andro manaraka.
Ny serivisy vaovao dia hampiasaina amin'ny Alakamisy sy Alahady amin'ny alàlan'ny fiaramanidina Airbus A330-900neo manara-penitra, manolotra flatbed 32 amin'ny Business, seza 21 amin'ny Premium Economy ary seza 237 amin'ny kilasy Economy, rafitra fialamboly, fahefana eo amin'ny seza , ary ny fifandraisana Wi-Fi ao anaty sidina. Air Senegal manome fifandraisana mety amin'ireo mpandeha any Etazonia amin'ny alàlan'ny Dakar amin'ny lalana roa mankany Abidjan, Conakry, Freetown, Banjul, Praia, Bamako, Nouakchott, Douala, Cotonou ary Libreville.
Tamin'ny taona 2019, mpandeha iray tapitrisa mahery no nanidina teo anelanelan'i Etazonia sy Afrika Andrefana izay antenaina hitombo hatrany amin'ny alàlan'ny fanombohana io zotra vaovao io. Senegaly dia ivom-pivarotana sy fizahan-tany lehibe atsy Afrika Andrefana miaraka amin'ny foiben'ny Firenena Mikambana any Afrika Andrefana.
Ibrahima Kane, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Air Senegal dia nilaza hoe: "Ny tanjonay dia ny hanomezana dia an-dàlana mety sy mahaliana eo anelanelan'ny USA, Senegal ary Afrika Andrefana. Ny toerana misy an'i Dakar miaraka amin'ny fifandraisana marobe an'ny Air Senegal amin'ny alàlan'ny ivon-toerany voalohany amin'ireo tanàna lehibe rehetra any Afrika Andrefana dia ahafahan'ny làlana vaovao hitombo hatrany amin'ny tanjaka. Ho fanampin'izay, antenainay ny hampirisika ny fangatahan'ny mpizahatany amerikanina any Senegaly hizaha ny tantaran'ny kolontsaina manankarena, ny morontsiraka manerantany ary ny nahandro hafakely manerana ny firenena ”.
Air Senegal, dia mpitondra sainam-pirenen'i Repoblikan'i Senegal. Noforonina tamin'ny 2016, fanjakana fananana amin'ny alàlan'ny sandan'ny fampiasam-bola Caisse des Dépots et Consignation du Sénégal. Miorina ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Blaise Diagne any Dakar, Senegal.